कोरोना जोखिमको मुखैमा कर्णाली, बचाउने कसरी ? – Karnalitimes
कर्णाली टाइम्स बुधबार, भदौ ३, २०७७
विश्व यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण आक्रान्त छ । नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरु भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता बढी जनसंख्या भएका मुलुकहरुमा पनि संक्रमितको संख्या अत्यधिक दरमा बढिरहेको छ । यसको प्रभाव नेपालमा, अझ भनौं कर्णाली प्रदेशमा नपर्ने कुरै भएन । विशेषगरी भारतसँगको खुला नाका र रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका नागरिकहरु असुरक्षित किसिमले फिर्ता भएका कारण नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकोप्रति हामी सबै जानकार छौं, जसले गर्दा दिनप्रतिदिन भयावहको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यो अवस्था कहाँसम्म पुग्छ, अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
करिब ४ महिना लामो लकडाउनको उपलब्धी के ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँग अहिले पनि छैन । नागरिकहरुको दैनिक जनजीविका अस्तव्यस्त भएको छ । रोजगारी तथा उद्योग व्यवसायको अवस्था चौपट छ । कोरोना संक्रमणको दर दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । लकडाउनको अवधिमा कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि जुन तयारी तथा कार्य राज्यले गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेको देखिएन । यसबाट अबको अवस्था झन् भयावह हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । निश्चय पनि लकडाउन गरिरकेपछि लडकडाउन कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि जादुको छडी हुनुपथ्र्यो भन्ने आमनागरिकको भनाइ नहोला, तर लकडाउनको अवधिमा संक्रमण रोकथाम गर्न जुन तयारी, योजना तथा कार्यहरु गर्नुपथ्र्यो त्यसमा सरकार असफल भएको छ । प्रदेश सरकारले पनि लकडाउन अन्त्य पछि गर्नुपर्ने कार्यहरुको कुनै तयारी तथा योजना गरेको देखिँदैन । नागरिकको जनविविकालाई कसरी सामान्य बनाउने ? व्यापार व्यवसाय तथा रोजगारीलाई कसरी नियमित गर्ने ? संक्रमण रोकथाम कसरी गर्ने ? नागरिकले व्यक्तिगत तवरबाट गर्नुपर्ने सुरक्षाका प्रावधानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? सो कुरामा प्रदेश सरकारको तयारी देखिँदैन । सुरक्षाको कुरामा निर्णय गरेर तथा आदेश दिएर मात्र हुँदैन । सुरक्षात्मक प्रावधान व्यक्तिले कार्यान्वयन गरे÷नगरेको अनुगमन, निरीक्षण तथा निगरानी गरिरहनुपथ्र्यो । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक तवरले फिल्डमै गएर खटिनुपथ्र्यो, त्यो प्रदेश सरकार तथा अन्य सरोकारवाला पक्षबाट भएको देखिँदैन । यो अत्यन्त चिन्ता र लज्जाको विषय हो ।
कर्णाली प्रदेशको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले नै कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने अवसर प्रदेश सरकारलाई अझै पनि बाँकी छ । तर, त्यो अवसर गुमाएमा भने कोरोना पक्कै पनि समुदायस्तरमा फैलिनेछ । यो दुर्भाग्य हुनेछ । किन कि समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएर भयावह अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि अहिलेको संरचना र तयारीले पुग्ने छैन । यसबाट अकल्पनीय रुपमा ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । अतः त्यसको लागि हामीले परीक्षणको दायरालाई बढाउनै पर्छ, नाकामा कडाई गर्नै पर्छ, कन्ट्याक्ट टे«सिङलाई समयमै सवलिकरण गर्नै पर्छ र संक्रमितको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय तथा संघीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर कोरोना भन्दा अगाडी बढ्नै पर्छ । नत्र भने निश्चित छ, कोरोनाले जित्नेछ र हामीले हार्नेछौं ।
Prevजीप दुर्घटना हुँदा २ जना घाइते
Nextदैलेखमा ३ जनाको मृत्यु, १ जना बेपत्ता